ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မူဆလင်တိုက်ခိုက်ရေးဟာဘယ်သူကစပြီး ဘယ်သူ့ကို ဦးတည် နေသလဲ?
မူဆလင်တိုက်ခိုက်ရေးဟာဘယ်သူကစပြီး ဘယ်သူ့ကို ဦးတည် နေသလဲ?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း အောက်မှာ ကွန်မန့် ပေးသူတွေမှာ လေ့လာမိသလောက် နဲ့ အတွေးကို ဆက်နယ်ချဲ့လိုက်တော့ ပုံရိပ်တခု ကို ပိုပြီး ပီပီပြင်ပြင် တွေ့လာတယ်။
အဲဒီ ကွန်မန့် တွေမှာ လူတစ်စုပေးတဲ့ ကွန်မန့်တွေရဲ့ သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ စုလိုက်တော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်လာရင် ကုလားတွေကို အခွင့်အရေး ပေးတော့မယ်... ဆိုတဲ့ ဆိုက်ဝါး ကို အထင်းသား တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီလို ဆိုက်ဝါးဟာ မသိနားမလည်တဲ့ ဗမာ လူထုရဲ့ အသဲနှလုံးတွေကိုလှုပ်ခါ စေတဲ့ စနက်တံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံမှာ ဒီမိုကရေစီ အိုင်ကွန် အနေနဲ့ နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွန်းအရ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စကားကိုတော့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ဥပဒေ ထဲက နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ပါပဲ။ ကုလားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မူဆလင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်ယာန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်နေရင် အခွင့်အရေး တန်းတူ ပေးရမယ် ဆိုတာ ဥပဒေ နားလည်သူတိုင်း သိတယ်လေ။ တကယ်လဲ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိပြီး ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်နဲ့ တိုးတက် တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ချင်ရင် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ အလေးမထားလို့ မရပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ တခြားမဟုတ်၊ ဥပဒေ တခု အောက်မှာ တန်းတူ အခွင့်အရေး ကို ပြောတာပါ။ အခုထိတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ တောင် ပြည့်မီအောင် မလိုက်နိုင်သေးပါ။
ဒီအချက် ကို ကြံ့ဖွတ်ပျူရိုကရေစီက ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ အဲဒါကြောင့် မူဆလင် တိုက်ပွဲစလိုက်တာနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ တရားဟောနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ၈၈ ကျောင်းသား အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အခွင့်ကောင်း ရသွားတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာလဲ နိုင်ငံရေး ခေတ် ရေစီးကြောင်း နားမလည်သူတွေက ခတ်များများ ဆိုတော့ လူများစု ဖြစ်တဲ့ ဗမာတွေအတွက် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဆိုတာနဲ့ အားလုံး ရူးတော့တာပဲ။ လူပြိန်းကြိုက် နိုင်ငံရေး သမားများကတော့ မျက်နှာပန်းလှအောင်၊ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ မဲ ရအောင် လုပ်တော့မယ်လေ။ အဲဒါကိုက ကြံ့ဖွတ်အမတ် တွေရဲ့ ၂၀၁၅ ပန်းတိုင်ပဲ။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး စကားပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်တော်သားတွေဟာ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး တန်းတူ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ထုတ်ပြော လိုက်တာနဲ့ အမတ် နေရာ ပျောက်တော့မယ်။ အဲဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့တန်းတင် တဲ့ ပါတီ လဲ လူကြိုက်နဲသွားအောင် အခုကနေ အရှိန်အဟုန် ကောင်းအောင် လော်ဘီ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သိသာလွန်းနေပါတယ်။
ကြံ့ဖွတ်ကတော့ ရှင်းတယ်... သူတို့ နေရာ ရလာတာကိုက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ချိုသလား၊ ခါးသလားမှ မသိပဲ။ သူတို့ နေရာရဖို့က အဓိက လေ။ ဒီတော့ ကုလား တိုက်ပွဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး အရေးမကြီးဘူး၊ လို့ ကြိုးစားပြီး ပြောနေတဲ့ လူတွေဟာ အရင်က စစ်အစိုးရ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေဟာလဲ လိုအပ်ချက် တခု အနေနဲ့ အသိအမှတ် ပြုပြီးသား ဖြစ်သွားပြီလေ။ အခုထိလဲ အထက်ပိုင်း ပါတီလူကြီးတွေကို အောက်ခြေ ပါတီ ၀င်တွေ ဝေဖန်ရဲသေးတာမှ မဟုတ်တာ။ ပါတီ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲလဲ မလို၊ ပါတီ ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကလဲ မရှင်းမရှင်း။ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်။ အောက်ခြေ ပါတီ ၀င်တွေကတော့ အထက်ဖါးအောက်ဖိ။ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ကြံ့ဖွတ် အတွက် မလို။ အာဏာ နဲ့ ပါဝါ၊ ဓန အင်အားပဲ လိုတယ်။
ဒီအချက်တွေကို တွက်ဆ လိုက်တော့မှ ဘယ်သူကစပြီး ဘယ်ဖက်ကို ဦးတည် နေတယ် ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပိုရှင်းအောင် သိလာရတယ်။
3:59 PM Htut Htut No comments
- See more at: http://www.dawnmanhon.com/2013/06/blog-post_3128.html#sthash.rlrxDmrm.dpuf